Alshabaab oo weerartay saldhig. - Wargeyska Faafiye
Alshabaab oo weerartay saldhig.
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku lahaayeen xerada Laanta Buuro ee gobolka Shabeellaha Hosse oo qiyaastii 45 km u jirta caasimada Muqdisho.
Dagaaalkan oo labo jiho ay ka soo qaaday Al-Shabaab ayaa keenay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac.
Inta la ogyahay lix qof oo ay ku jiraan labo rayid ah ayaa ku dhintay dagaalka.
War ka soo baxay Al-Shabaab waxa ay ku sheegeen, in ay ku qabsadeen mudo kooban xerada kuna qaateen sagaal gaari oo todobo kamid ah ay yihiin kuwa qoryuhu ku rakibanyihiin kuna dileen askar ka badan todobaatan.
Ma jiro wax wara oo ka soo baxay milatariga Soomaaliya oo ku aadan dagaalkan xalay ka dhacay Laanta Buuro. Isku dayo ay BBC-du kula xiriirtay saraakiisha ugu sareeya milatariga Soomaaliya ayaanay ka helin wax jawaaba.
Ilo madax bannaan ayaa BBC-da u xaqiijiyay in Shabaabku horey u qaateen ilaa afar gaari oo ah kuwa qoryuhu ku rakibanyihiin, mid kalena ay gubeen kadib markii uu god uga dhacay.
Gawaaridan shabaabku qaateen ayaa duhurnimadii maanta laga gudbiyay deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, oo ay ka taliyaan Al-Shabaab sida ay BBC-da u sheegeen dad ku sugan Awdheegle.
Shabaabka ayaa kordhiyay weerarada ay ku hayaan xeryaha ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa ciidamada dowladda tan iyo sanadkii hore.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsGaroowe: Guryo loo dhisay barakacayaal.Ahlu Sunna oo xirtay saraakiil.plane with over 40 people on board crashes in SiberiaShabaab oo sheegtay in laga saari karin KismaayoAl-Shabaab loses key town in Hiran region.